Maalinta xornimada ee 26ka Juun - BBC Somali
Maalinta xornimada ee 26ka Juun
26 Juunyo 2011
Image caption Madaxweynaha Somaliland, Axmed Siilaanyo
Magaalada Hargeysa, caawa waxaa xaflad weyn oo loo sameeyey xuska 26-ka june lagu qabtay fagaaraha loo yaqaan beerta xorriyadda. waxaa ka qayb galay madaxweynaha, Axmed Siilaanyo, xubno golaha wasiirrada, golayaasha baarlamaanka, ururrada bulshada iyo dadweyne.
Xalayna, Madaxweynaha Somalia, Sharif Sh. Ahmed, wuxuu is-barbar dhigay marxaladda Somalia ay maanta ku jirto iyo tii 60kii. Wuxuu ka hadlayey xaflad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia oo lagu xusayay 26ka June ee xorriyaddii gobolladda Waqooyi ee sanadkii1960. waxaa uu sheegay in waqtigaas gumaysi laga xoroobay haatanna loo baahan yahay in laga xoroobo al Shabaab iyo al Qaacida.
Haddaba ruug-caddaagii siyaasiga ahaa ee waan waantii madaxbannaanida ee Soomaalida iyo Ingiriiska dhexmartay hoggaminayey, aakhirkiina saxiixay heshiiskii xorriyadda Somalilad, Allaha u naxariistee, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ayaa wareysi BBCda laanta Af Ssoomaaligu la yeelatay 5tii May 1960 wuxuu faahfaahin ka bixiyey wada hadaladii uu madaxbannaanidii Somaliland uu kala yeeshay wasiirkii mustacmaraadka ee UK ee waagaas.